मुला खानुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् कति फाइदाजनक, कति गुणकारी ? — sancharkendra.com
‘मुला’ शब्द हामी कमसल, कमजोर वा नाथे भन्ने आशयमा प्रयोग गर्छौं । तर, यो शब्दले मुलाको अपमान गरिरहेको छ । किनभने मुला हाम्रो बोलीचालीमा प्रयोग गरिए जस्तो कमसल कुरा होइन । मुलाको स्वास्थ्य लाभ थाहा पाउनुभयो भने चकित हुनुहुनेछ ।
कब्जियतका कारण पनि पाइल्स हुने गर्छ । मुलामा डिटक्सिफाइङ्ग गुण हुन्छ जसले पाचन प्रणालीलाई चुस्त बनाई कब्जियत हुने समस्याबाट राहत प्रदान गर्छ । त्यसैले पनि पाइल्स हुने व्यक्तिलाई चिकित्सकहरु मुला वा मुलाकेा जुस सेवन गर्न सल्लाह दिने गर्दछन् ।
मुलामा नन-डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट भरपुर मात्रामा पाइन्छ तौल कम गर्नमा लाभदायक मानिन्छ । त्यसबाहेक, मुलामा क्यालोरीको मात्रा ज्यादै न्युन हुन्छ र यसले शरीरको फ्याटलाई एकत्रित हुनबाट रोक्ने काम गर्छ । त्यतिमात्र हैन, यसले वेली फ्याट पनि कम गर्ने हुदाँ वजन कम गर्न चाहनेहरुका लागि राम्रो विकल्प हुन सक्दछ ।
जण्डिस लाग्दा होस् वा कलेजो सम्बन्धि कुनै समस्या हुदाँ होस्, चिकित्सकहरु प्राय मुला सेवन गर्नु सल्लाह दिने गर्छन् । मुलामा विशेषगरी एन्टी व्याक्टेरियल गुण हुन्छ जसले पेट र कलेजोलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । मुलामा डिटक्सिफाइङ्ग तत्व समेत हुने भएकोले यसले रगतमा भएका विषाक्तलाई छान्न (प्युरिफाई गर्न) मद्दत गर्छ । साथै, यसले कलेजामा हुने विषाक्तलाई समेत सफा गरी कलेजोमा संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ ।
मुलामा एन्टी अक्सिडेन्ट उच्च पाइन्छ । एन्टी अक्सिडेन्टले फि्र रेडिकल्ससित लड्नमा मद्दत गर्छ र सेल्स विग्रनबाट जोगाउँछ । मुलाले शरीरमा विषाक्त जम्मा हुनबाट रोक्नुका साथै शरीरमा रहेका सम्पूर्ण विषाक्तलाई बाहिर फाल्नमा मद्दत गर्छ ।